Banyere Anyị - Quanzhou Omi n'uwe Co., Ltd.
Mkpịsị Aka Yoga
Yoga efe ara
leggings & obere
Arụ Ọrụ Baa n’ala
Nọ n'ọrụ Wear Top
Argba ígwè na-eyi
Gba ígwè pad
Cgba ígwè na-eyi Bottom
Gba ígwè na-eyi Top
Uwe eji efe
Uwe elu mmiri
Akwụkwọ nduzi na-arụ ọrụ na 2021
ANYA ANY V
AKW TEKWỌ ANY.
ANY SU na-ezuru anyị
Ndi anyi bu:
Quanzhou Omi n'uwe Co., Ltd e hiwere na 2008 na-akwado ihe na ndị ọzọ ahịa si n'ụwa nile. Dị ka a n'ichepụta ụlọ ọrụ maka egwuregwu wears, anyị nọgidere na-enwe a ogologo adade uru, chịkọbara na nnukwu ahụmahụ na ngwaahịa R&D, n'ichepụta, ahịa ọrụ, na Quality akara.
Site na ntinye aka anyị na ngwaahịa, ọrụ aka ma melite usoro anyị, anyị na-achọ ime ka usoro mmepụta uwe niile dị mfe, ahụmịhe na enweghị nsogbu maka ndị ahịa.
Site na ọdịbendị a na-eme ka anyị nwee, ụgbọala na nka nke onye ọrụ ọ bụla, anyị nọ iche iche iji nye ọrụ kachasị mma na ndị ahịa zuru ụwa ọnụ.
Bebụ ụlọ ọrụ nke kachasị nghọta ma na-emeju ngwaahịa, ọrụ na mkpa nke ụdị ejiji-ụwa niile
Iji nye ezigbo ebe ọrụ ebe ndị mmadụ na-esite n'ike mmụọ nsọ too ma nye ihe kachasị mma
Bebụ onye ibe nwere ntụkwasị obi ma nyere aka karịa atụmanya
Iji mepụta ngwaahịa na-ezute atụmanya dị mma nke ndị ahịa anyị & ndị ahịa ha
Zụlite njikọ nke ndị mmekọ na iwulite ikwesị ntụkwasị obi
Gbaa mbọ hụ na ndị anyị na ha na-emekọ ihe na-enye ezigbo ụgwọ ọrụ yana gburugburu ebe obibi na-adịghị ize ndụ
Bebụ onye ibe kwesịrị ntụkwasị obi site na ịkwado ụkpụrụ nke ime ihe n'eziokwu na ichebe IP nke ndị ahịa anyị
Anyị nwere ndị ọrụ aka ọrụ na R&D, Teknụzụ, mmepụta na ọrụ. Anyị bụ ndị otu nwere njikọta siri ike na-arụ ọrụ maka naanị ebumnuche: inye ndị ahịa anyị ọrụ nkwụsịtụ site na ọ bụghị naanị nkwado teknụzụ ọkachamara kamakwa iguzosi ike n'ezi na ọbụbụenyi.
Anyị na-pụrụ iche na-arụsi ọrụ ike wears, egwuregwu egwuregwu, na n'èzí eyi. Anyị na ngwaahịa e lekwasịrị anya adịchaghị collection na ọtọ egwuregwu. Dị ka agba ọsọ, uwe mkpakọ, yoga na ahụ ike, ,gba ịnyịnya ígwè wears na n'èzí oyi Jaketị, nke na-tumadi agba na breathability, UV-àmà na ngwa ngwa akọrọ. N'otu oge, anyị na-n'okpuru na-emepe emepe ọhụrụ ákwà na eco-enyi na enyi, R-PET ihe onwunwe, nke na-eme ka anyị na-asọmpi na pụtara ìhè.
Anyị na-aghọ ndị ọzọ asọmpi site mwekota nke ọkọnọ yinye, ọ bụghị naanị mmepe na n'ichepụta nkwado si esịtidem n'ichepụta nkeji, na-chiri anya mmekọrịta na ọtụtụ ndị magburu onwe ụlọ mmepụta ihe na mgbere na Chile China, Taiwan na Asia mba, ndị na-pụrụ iche na ụdị nile nke egwuregwu eyi.
NO.155, Fanrong okporo ụzọ, Quanzhou, Fujian, China
Ethkpụrụ Omume anyị